११ बुँदे आचारसंहिताबारे के भन्छन् नेकपाका केन्द्रीय सदस्यहरु ? | Ratopati
personरातोपाटी संवाददाता exploreकाठमाडौं access_timeमाघ ८, २०७६ chat_bubble_outline2
काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले आफ्ना सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ता र पार्टी सदस्यहरुका लागि तीन दिनअघि मात्रै ११ बुँदे आचारसंहिता जारी गरेको छ । आचारसंहितामा परिवारका सदस्यलाई ‘तँ’ भन्न नहुनेदेखि भ्रष्टाचार नगर्ने र कसैले गरेमा त्यसको सूचना सरकारलाई दिनेसमेत उल्लेख छ । जसलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा फरक फरक धारणा र दृष्टिकोण आइरहेका छन् ।
कतिपयले आचारसंहिता नेतृत्वबाटै लागू गर्न सुरु गर्नुपर्ने बताएका छन् भने कतिपयले केही नेता कार्यकर्ताका लागि मात्रै आचारसंहिता जारी गरिएको त होइन भनेर पनि प्रश्न गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा आएका यस्ता टिप्पणीपछि हामीले आचारसंहितालाई पार्टीभित्रका नेता तथा कार्यकर्ताले चाहिँ कसरी हेरेका छन् त ? भनेर उनीहरुको धारणा बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ । त्यसका लागि नेकपाका ५ जना केही केन्द्रीय सदस्यलाई सोधेका छौँ, ‘जारी आचारसंहिता व्यवहारमा लागू गर्न कति सम्भव छ र त्यसको सुरुवात कोबाट हुनुपर्छ ?’ उनीहरुको जवाफ जस्ताको त्यस्तैः
सकारात्मक पहल कदमी : झक्कुप्रसाद सुवेदी
दुई पार्टी तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकतापछि गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भइसकेपछि ल्याइएको पार्टी आचारसंहिताले पार्टीलाई शुद्धीकरणको दिशामा लैजान्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । साथै यसलाई सकारात्मक कदमका रूपमा पनि लिनुपर्छ । जसले पार्टीलाई थप मजबुत र सुदृढ बनाउन सहयोग गर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो । यस्तो सकारात्मक पहल कदमीका बारेमा आलोचना वा टिप्पणी गर्नु उचित होइन । फेरि यो पहल कदमी मात्रै भएकाले पार्टीमा क्रान्तिकारी रूपान्तरण नै भइहाल्छ भन्ने पनि होइन । अनुशासनमा बस्नु बसाउनु सबैका लागि राम्रो हो ।
ओली प्रचण्डबाट लागू गर्नुपर्छः केशवप्रसाद नेपाल
पार्टीले आचारसंहिता जारी गर्नु सकारात्मक हो । यसलाई कार्यान्वयन गर्नु हामी सबैको दायित्व हो । कम्युनिस्ट सिद्धान्त, राजनीति, आदर्श नैतिकता र वर्गीयतालगायत मूल्य मान्यताहरु छन्, ती हाल स्वखलित भइरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का तर्फबाट केही यस्ता आचारसंहिता जारी हुनु सच्चा मार्क्सवादी लेनिनवादीहरुका लागि खुसी र गौरवको कुरा हो । तर पार्टीभित्रका केही व्यक्तिहरु जसमा कम्युनिस्ट सोँच, दृष्टिकोण र विचार स्खलित भएका छन् उनीहरुका लागि यो आचारसंहिता मुटुको किलो पनि हुनसक्छ । त्यसकारण यो आचारसंहिता नेतृत्व अर्थात हाम्रा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बाट आचारसंहिताको पालना गर्न सुरु गर्नुपर्छ । त्यसपछि केन्द्रीय सदस्यहरु, विभागहरु सल्लाहकार, ज्येष्ठ नागरिक मञ्च र प्रदेश हुँदै सेल कमिटीहरु समेतमा लागू गर्दै जानुपर्छ । यसरी कार्यान्वयनमा गए मात्रै जारी आचारसंहिताको औचित्य पुष्टि हुन्छ । कम्युनिस्ट आदर्शहरुलाई ढाडस दिन ल्याइएका आचारसंहिताले स्खलन भएकाहरुले लागू गर्न हिचकिचाउने र अलमल गर्ने गर्छन्, यस्तो अवस्थामा यो लागू नहुन सक्छ तर मार्क्सवाद लेनिनवादप्रति विश्वास गर्नेहरुले यो आचारसंहितालाई अनौठो रूपमा लिँदैनन् ।
अहिले हाम्रो समाजमा पुराना सोच त्यसमा पनि पुँजीवादी सोच कायमै छ । त्यही पुरानो सोचको मात्रै कुरा गर्ने हो भने यो लागू हुन असम्भव छ ।
नेतृत्वको पारदर्शितामा प्रश्न छः ठाकुरप्रसाद गैरे, केन्द्रीय सदस्य
देश, पार्टी, समाज र परिवारको राम्रोका लागि आचारसंहिता जारी गरिएको हो । आचारसंहिता जारी गर्ने अनि लागू नगर्ने भन्ने हँुदैन । लागू हुनुपर्छ, जसका कारण समाज वा पार्टी राम्रो दिशामा हिँड्न सहयोग पुगोस् । कुनै पनि पार्टीका आफ्नै विधि, विधान र पद्धति हुन्छन् र चल्छन् । नेकपाको पनि आफ्नै सैद्धान्तिक र वैचारिक नीति सिद्धान्तहरु छन् । पार्टीका नेताहरुको विचार, जीवनशैली र आचरण अरूले पनि अनुसरण गर्ने हुँदा उनीहरुको जीवनशैली सरल हुनुपर्छ भनिएको छ । नेताहरुको जीवन शैली र पारदर्शिताका बारेमा धेरै प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । आचारसंहिता जारी भएपछि सामाजिक सञ्जालमा धेरैले अब ‘नेकपाका नेताहरुले यो आचारसंहिता लागू गर्लान् त ?’ भनेर प्रश्न गरेका छन् । त्यसकारण पनि अब नेताहरुबाटै आचारसंहिता पालना गर्ने र लागू गर्न सके मात्रै यसको सान्दर्भिकता अझ बढ्न पुग्छ ।
सम्झाएको मात्रै होः विष्णु रिजाल, केन्द्रीय सदस्य
पछिल्लो चरणमा पार्टीमा रहेर पनि एकअर्काविरुद्ध अभिव्यक्ति दिने, आक्षेप लगाउने क्रम बढ्यो । जसले गर्दा अराजकता बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता र चासो सुरु भयो । यो चासो र चिन्तासँगै पार्टी अनुशासनमा नेता कार्यकर्तालाई बाँध्न आचारसंहिता जारी गरिएको हो । आचार संहितामा हामीले जीवनमा भोगिरहेका र गरिरहेका विषय वस्तुहरु नै धेरै छन् । त्यसैले यो गर्नु हुने र यो नहुने भनेर पार्टीले सम्झाएको भन्ने अर्थमा बुझ्दा पनि हुन्छ । खासगरी नेता कार्यकर्तामा कम्युनिस्ट आदर्श र चरित्रमा विचलन नआओस् भन्ने आशयले पार्टीले आचारसंहिता जारी गरेको हो । सम्झाएको वा स्मरण गराएको मात्रै हो । आचारसंहिता सबै नेता कार्यकर्तालाई लागू हुने भएपछि नेताहरुको विलासी जीवन शैलीमा पनि परिवर्तन हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ ।
अगुवाले झन् बढी कार्यान्वयन गर्नुपर्छः धर्मशिला चपागाईं
समाज, पार्टी या परिवार राम्रो, सम्पन्न, खुसी र सुखी बनाउने कुराले कसैलाई अहित गर्दैन । हामीले हिजोदेखि गर्दै र भोग्दै आएका कुरालाई पार्टीले बुँदागत र आचारसंहिताका रूपमा ल्याएको छ । यसले समाजलाई सभ्य र पार्टीलाई मजबुत बनाउन अवस्य सहयोग गर्छ नै । पार्टीमा केही न केही बिग्रेको देखेर सुधारका लागि नै आचारसंहिता ल्याइएको हुनपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ । त्यसैले यसलाई कडा ढङ्गले कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । कार्यान्वयन गर्दा नेतृत्व र अगुवाहरुबाटै सुरु भयो भने त्यसको अनुसरण तल्ला तहका नेता कार्यकर्ताले पनि सहजै गर्छन् । किनभने नेतृत्वमा अरूमा भन्दा बढी जिम्मेवारी हुनुपर्छ र छ भन्ने मलाई लागेको छ । त्यसकारण समाजलाई सही दिशामा डोहोर्याउन र पार्टीलाई मजबुत र एकढिक्का राख्न पनि यो आचारसंहिताले मद्दत गर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो ।
Jan. 23, 2020, 7:13 a.m. लोक विनयी
साॅचो अर्थमा नेकपा बिचलनको गहिरो खाडलमा गतिलै डुबेको रहेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ यहाॅ सम्म की खाडल भित्र पनी भासमा भासिएको छ रहेछ भन्ने लाग्छ । पार्टी अनुशाशित हुनु पर्छ भनेर अध्यक्ष द्वय सहितको पदाधिकारी बैठकले नियम उपनियन जे जे नियम पालना गर्नु पर्छ भनेर बुॅदागत निर्णय गरेता पनि अनशाशन पालना तब सम्म हुदैन जबसम्म नेतृत्व स्वयं अनुशाशित बन्दैन !
Jan. 23, 2020, 5:59 a.m. प्रतिक, सिरहा
यस्तो कुरा भन्नू पर्दैन , व्यबहारमा देखाउने हो । नेतृत्वले झन बढी देखाउनु र पालना गर्नु पर्छ ।